ကိုဗစ် နဲ့ စားဝတ်နေရေး ကြိုက်တာရွေး ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံတွေ့ရတော့ မှာလား? – Shwe Sar
ဒီလိုနေရာကို မရောက်တော့ဘူး လို့ လျှော့တွက်ထားမိတာ သိပ်ကို မှားသွားပြီ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုဗစ်ရန်က ကင်းဖို့ဆိုတာ အလုပ်မလုပ်ပဲ အိမ်ထဲအောင်းနေမှသာ လွတ်နိုင် မှာ ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မတောင့်ခံနိုင်ကြတော့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အလုပ်တွေလုပ်ရင်း ကိုဗစ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့လမ်းကို ရွေးခဲ့ကြတယ်။
ရာသီ အကူးအပြောင်းချိန်မှာ ပိုဆိုး သွားတယ် ကိုယ့်ဆိုင် ပတ်ဝန်းကျင် မှာလည်း ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူတွေ အနံ့မရသူတွေက အရမ်းများနေပြီ။ ကျွန်တော် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်မှုနဲ့ အညီ လုပ် တယ် မရဘူး မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူး ဒါပေမယ့် ကိုဗစ်ကို အနိုင်ပြန်တိုက်ပြီး မကြာခင် အိမ်ပြန်နိုင်မှာပါ။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း အထူးဂရုစိုက်ကြပါ ကိုဗစ်ကို လျှော့မတွက် ကြပါနဲ့။ ဖြစ်လာရင် အထိ နာ ပါတယ် ခံရဆိုးပါတယ် ရောဂါအခံရှိရင် သေတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆို ဘာရောဂါအခံမှ မရှိတာတောင် ရောဂါစဖြစ်ချိန် မှ ၄ ရက်မြောက်မှာ အနံ့ပျောက်ပြီး အသက်ရှူမဝသလို ဖြစ်လာတယ်။ မောလာတယ် Mask တပ်ရင် ပိုဆိုးတယ် ၁၀ မိနစ် ထက် ပိုမတတ်နိုင်ဘူး ပြန်ချွတ်ရတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံး ကိုဗစ်ကပ်ဆိုးကြီးမှ အမြန်ဆုံး ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။
ဒီလိုနရောကို မရောကျတော့ဘူး လို့ လြှော့တှကျထားမိတာ သိပျကို မှားသှားပွီ တကယျတော့ ကြှနျတျောတို့တှေ ကိုဗဈရနျက ကငျးဖို့ဆိုတာ အလုပျမလုပျပဲ အိမျထဲအောငျးနမှေသာ လှတျ နိုငျ မှာ ပါ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျသူမှ မတောငျ့ခံနိုငျကွတော့ဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ အလုပျတှလေုပျရငျး ကိုဗဈနဲ့ ရငျဆိုငျဖို့လမျးကို ရှေးခဲ့ကွတယျ။
ရာသီ အကူးအပွောငျးခြိနျမှာ ပိုဆိုး သှားတယျ ကိုယျ့ဆိုငျ ပတျဝနျးကငျြ မှာလညျး ကိုဗဈပိုးတှသေူ့တှေ အနံ့မရသူတှကေ အရမျးမြားနပွေီ။ ကြှနျတျော ကနျြးမာရေးလမျးညှနျမှုနဲ့ အ ညီ လုပျ တယျ မရဘူး မကာကှယျနိုငျခဲ့ဘူး ဒါပမေယျ့ ကိုဗဈကို အနိုငျပွနျတိုကျပွီး မကွာခငျ အိမျပွနျနိုငျမှာပါ။ သူငယျခငျြးတို့လညျး အထူးဂရုစိုကျကွပါ ကိုဗဈကို လြှော့မတှကျ ကွ ပါနဲ့။ ဖွဈလာရငျ အထိ နာ ပါတယျ ခံရဆိုးပါတယျ ရောဂါအခံရှိရငျ သတေတျပါတယျ။
ကြှနျတျောဆို ဘာရောဂါအခံမှ မရှိတာတောငျ ရောဂါစဖွဈခြိနျ မှ ၄ ရကျမွောကျမှာ အနံ့ပြောကျပွီး အသကျရှူမဝသလို ဖွဈလာတယျ။ မောလာတယျ Mask တပျရငျ ပိုဆိုးတယျ ၁၀ မိနဈ ထကျ ပိုမတတျနိုငျဘူး ပွနျခြှတျရတယျ။ကမ်ဘာပျေါရှိ လူသားအားလုံး ကိုဗဈကပျဆိုးကွီးမှ အမွနျဆုံး ကြျောလှားနိုငျပါစေ။
Previous post ကွယ်လွန် သူ NLD အမတ်လောင်း ကိုထိုက်ဇော် ရဲ့ ဇနီးရေး တဲ့ စာ ….
Next post ပုရိသတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဆွဲအားပို နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ချပြလာ တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း